Tsipy kanetibe : Katita telo mianadahy hanafika any Torkia
Sambany no hisy fifaninanana ho an’ny ankizy. Hanana solon- tena amin’ny fifaninanana « World children Sport games », izay hatao any Ankara Torkia, amin’ny 24 avrily ka hatramin’ny 1 mey ho avy izao, i Madagasikara, eo amin’ny taranja tsipy kanetibe.
Ankizy telo mianadahy no voafantina amin’izany dia i Mampionona Ramahefasoa sy Jean Eric Randrianjafinirina eo amin’ny olon-droa lehilahy ary Mamitiana Ravaka Rakotoarisoa kosa ny eo amin’ny vehivavy. Nandritra ny fifaninanana nasionaly natokana ho an’ny ankizy 12 ka hatramin’ny 14 taona, izay natao teny amin’ny toeram-pilalaovana teny amin’ny « Le Cheval Blanc, Ivato omaly, no nahafahana nifantina azy telo mianadahy ireo. « Isan’ny namiratra i Ravaka sy Mampionona ary Jean Eric nandritra ny fifaninanana ho an’ny ankizy io, ka mazava fa izy ireo no hisolo tena antsika amin’io fifaninanana iraisam-pirenena hatao any Torkia io », hoy i Gérard Naturel, filohan’ny federasiona malagasin’ny tranja tsipy kanetibe.